La kulan 12 jirka ah arday iyo maamule dugsi! | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / La kulan 12 jirka ah arday iyo maamule dugsi!
La kulan 12 jirka ah arday iyo maamule dugsi!
Himilo FM – Leonardo Nicanor waa 12 jir dhigta dugsiga sare hase ahaatee waxa uu maamulaa dugsi isaga u gaar ah oo uu waxbarashada kaga caawiyo carruurta iyo dadka kale.
Waxa uu jecel yahay waxbarashada oo hammi sare uu u hayo isaga oo xiiseeya inuu u gudbiyo aqoontiisa ardayda kale, waana midda keentay inuu furto dugsi u gaar ah.
Markii uu arkay asxaabtiisa qaar oo ay ku adkaatay inay sii joogaan dugsiga iyo kuwa kale oo fududeysanaya waxbarashada, waxa uu go’aansaday da’yarkan inuu isbadal sameeyo.
Sannadkii la soo dhaafay, waxa uu ayeeyadiisa Ramona u sheegay inuu furanayo dugsi gaar u ah, wuxuuna ka codsaday inay ka caawiso dhismahiisa. Waa lagu guuleystay in la furo dugsiga oo hadda Leonardo uu wax ku barro ku dhawaad 40 arday.
12 jirkan ah ardayga iyo maamulaha waxa uu ku nool yahay magaalada Las Piedritas oo ku taalla dalka Argentine. Mr Leonardo waxa uu warbaahinta u sheegay inuu ku faanayo dadaalka uu sameeyay kuna caawiyay arday badan.
Dhismaha dugsiga Leonardo uma weyna sida dugsiyada kale laakiin kaalmada deriska iyo hay’adaha daneeya waxbarashada carruurta ayaa sii haggaajineysa maalinba maalinta ka danbeysa.
Waxaa xusid mudan in waxyaabaha dugsi looga baahan yahay inay u dhammeystiran yihiin sida sabuuradda, maktabad yar iyo gambaleel dhawaaqa. Waxaa intaa dheer in dugsigu leeyahay qalab cod kaasi oo laga qaado astaanta qaranka Argentine kahor inta aan la gelin xisadaha.
Arrinta xiisaha badan waxay tahay in xaalad kasta oo jirta sida roob xooggan oo da’aya iyo wixii lamid ah in Leonardo ka go’an tahay inuu qaato baaskiilkiisa si uu u tago dugsiga una bixiyo xiisadaha maalintaasi.
Previous: 5 ciyaaryahan oo laga yaabo in ay ka dhaqaaqaan Arsenal bisha January
Next: Jose Mourinho oo aan hubin dhaqaalaha kooxda ee suuqa bisha Janaayo.